Bukaan qabay COVID-19 oo garaacis nafta kaga qaaday bukaan kale oo… – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nin 37 sano jir ah oo la sheegay inuu taangi oxygen ah ku garaacay kuna dilay bukaan qabay xanuunka Covid, isagoo ku sugnaa sariirtiisa gudaha isbitaal ku yaalla gobolka California, ayaa lagu eedeeyay dil iyo nacayb.
Jesse Martinez ayaa ka xumaaday markii ninka 82 sano jirka ahaa ee ay halka qol wadaagayeen bilaabay inuu duceysto, sida ay sheegeen booliiska Los Angeles.
Mr Martinez ayaa kaddib la sheegay inuu soo qaatay taangi oxygen uu ku jiray kaddibna uu bilaabay inuu ku garaaco.
Ninka waayeelka ahaa ayaa geeriyooday maalintii xigtay. Labada nin oo ay booliisku sheegeen inaysan is aqoon, ayaa laga daweynayay coronavirus iyagoo ku sugnaa qol ay labo qof wadaagaan oo ku yaalla isbitaalka Antelope Valley ee magaalada Lancaster oo ku taalla California.
Isbitaallada ayaa wajahaya shaqaale yaraan, gobolka ayaana codsaday ilaa 3,000 oo shaqaale caafimaad oo dheeraad ah, kuwaasoo laga keenayo ilaa Australia iyo Taiwan.